M/weynaha Puntland oo ka hadlay Arrinta Dekeda Boosaaso & Xog laga helayo dhanka P & O
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi deni ayaa sheegay in Sanadkaan Gudihiisa la bilaabayo Dhismaha Dekedda Boosaso walow uu Xusay ineysan Muhiim aheyn iney sheegaan wakhtiga rasmiga ah ee la bilaabayo shaqada.
Madaxweynaha oo la halayay BBC-da ayaa la weydiiyay iney jiraan dad shaki ka qaba inuusan hirgaleyn mashruucaasi oo uu horay u balan qaaday in la bilaabayo Bishan September balse aysan waxba ka suurtoobin, wuxuna sheegay iney Hirgalin doonaan Mashruucaasi.
Dhanka kale Madaxweyne Deni ayaa sheegay iney ku guuleysteen Dagaalka ka dhanka ah Kooxaha Dowladda Ka soo horjeeda, Islamarkaana la wiiqay Awoodooda, Walow ay weli jiraan Dilal qorsheysan oo la dhaca Magaalada Xeebta ku taala ee Boosaso.
Puntland iyo P & O oo qeyb ka ah shirkada Imaaraatka ee DP WORLD waxay heshiis ku galeen in labo sanno gudahood lagu dhiso dekeda magaalada Boosaaso, laakiin ilaa hadda waxba lama qaban, marka la eego shaqada la doonayey in la fuliyo eek u qoran heshiiskii baarlamaanka laga hor akhriyey.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u diiday in ay gabi ahaanba DP WORLD la wareegto dekedaha Boosaaso iyo Berbera, waxayna sheegeen in ay sharci darro tahay oo ay ku xadgudbeen madax banaanida Soomaaliya.
Xogaha hoose ee laga helayo mashruucan ayaa sheegaya in ay shirkaddu bixisay Malaayiin Dollar oo loogu talogalay in wax looga qabto arrimaha dekeda, laakiin aysan Xukuumadda Puntland waxba galin kaabayaasha dekeda.
Baarlamaankii hore ee Puntland ayaa in ka badan 2 Malyan oo Dollar ku ansixiyey heshiiskan bishii July 2018-kii, waxaana ilaa hadda lays weydiinaya waxyaabaha rasmiga ah ee kuqoran heshiiskan oo ahaa mid aan daahfureyn oo aysan dawladdu baahin.